युगसम्बाद साप्ताहिक - परिणामदायी वार्ताको खाँचो
Tuesday, 11.12.2019, 06:51am (GMT+5.5) Home Contact
परिणामदायी वार्ताको खाँचो
Tuesday, 03.10.2015, 11:29am (GMT+5.5)
सत्ता साझेदार कांग्रेस–एमाले र विपक्षी दल एनेकपा माओवादी–मधेशी मोर्चा बढ्दो आन्तरिक दवाव र बाह्य दवावकै कारण बल्लतल्ल औपचारिक वार्तामा बसेका छन् । गत शनिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको यो औपचारिक वार्ताले कुन गति र रुप लिन्छ भन्नेबारे अझै केही भन्न सकिने स्थिति छैन । वार्तामा सहभागी नेताहरूले सहमतिमा नै संविधान बनाउने पुनः सहमति गरेका र यो वार्तालाई परिणाममुखी बनाउने प्रतिब्द्धता व्यक्त गरेका भए पनि नेताहरूको बोलिमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था सिर्जित भएको छैन । संविधानसभा–१को चार वर्ष संविधान बनाउँछौं–बनाउँछौं, सहमतिको नजिक नजिक पुगेका छौं भन्दैमा बित्यो । संविधानसभा–२ को निर्वाचन भएपछि २०७१ माघ ८ गते भित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भयो तर आखिर कुनै नतिजा आएन । अब २०७२ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर नयाँ संविधान जारी गर्ने हौवा पिट्न थालिएको छ । सार्थक संवाद र परिणामदायी नतिजाको आमअपेक्षा बढ्दो छ तापनि नेताहरूको संस्कार, चरित्र र जवाफदेहिताविहीन प्रवृतिले गर्दा नतिजामुखी वार्ताप्रति विश्वास जागृत हुनसकेको छैन । यो वार्ताको मञ्चन विपरीत दुई धारका नेताहरूबीचको आन्तरिक समझदारीका कारणबाट सुरु भएको नभै बाह्य शक्तिको दवावबाट भएको संकेत त हालै भारतीय नेताहरूको दर्शन गरेर फर्केका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एनेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नै यथेष्ठ मात्रामा दिएका छन् । उनको प्रष्टै भनाइ छ– आफ्नो भारत भ्रमणले नै वार्तामा बस्न कांग्रेस–एमालेलाई दवाव बढाएको हो । नेपालको आन्तरिक राजनीति मतादेश वा जनादेशबाट नभै आकाशवाणीबाट चल्ने गरेको तथ्यको उद्घाटन समय समयमा हुने गरेकै छ । यस्तो कुराको आभास नेताहरूले नै पटकपटक दिने गरेका छन् । नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा दूरस्थ नियन्त्रण यन्त्रको प्रभाव नै ठूलो समस्याको बीज रहेको तथ्य निरन्तर अनुभूत हुँदैआएको कटु यथार्थ हो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमा बाहयशक्तिको चासो, प्रभाव र निर्देशनको सर्वाधिक प्रभाव रहने गरेकाले राष्ट्रिय चिन्तनधार दविँदै गएको र राष्ट्रिय स्वार्थ उपेक्षित हुँदैआएको छ । हाम्रो अन्तर्विरोधमा विदेशी शक्तिले खेल्दैआएका छन् । त्यसको गलत नतिजाको दूरगामी प्रभाव छ र त्यो नै हाम्रो भोगाइ बनेको छ ।
आम नेपाली जनताको चाहना छ– सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले वार्ताको जुन प्रक्रिया सुरु गरेका छन् त्यो नतिजामुखी बनोस् र चाँडोबन्दा चाँडो नयाँ संविधान बनोस्– जारी होस् । नेपाली जनताले लामो समयदेखि विधिविहीनता, संविधानविहीनता र समग्रतामा राज्यविहीनताकै पीडा भोगिरहेका छन् । राज्यको उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा कमजोर बन्दैगएको छ । सत्ताको महत्वाकाङ्क्षा राख्ने ठूला दलहरुका नेताहरू बाहिरी शक्तिको आशीर्वाद पाउन सधैँ लालायित हुनेगरेका छन् । राष्ट्रिय सम्मान र मर्यादालाई उपेक्षा गर्दै राष्ट्रको समग्र हितलाई तिलाञ्जली दिएर भए पनि निजी स्वार्थ पूरा गर्ने गुलामी मानसिकता प्रदर्शन गर्ने जुन प्रवृति मौलाएको छ त्यसले नै नेपाल र नेपालीको हुर्मत लिइरहेको छ । विदेशी प्रभुहरूको नजिक पुगेर आफ्नो देशका नेताहरूको पोल खोल्ने, कुरा लगाउने र स्वामीभक्ति प्रदर्शन गर्दै खुला हस्तक्षेपको गुहार गर्दै नांगो चरित्र प्रदर्शन गर्ने ताजा उदाहरण त डा. बाबुराम भट्टराईबाटै प्रस्तुत भएको छ । बाह्य शक्तिको दवावबाट सुरु भएको भनिएको अहिलेको वार्ताले सार्थक गति कति लेला र राष्ट्रिय सहमतिको वाञ्छित वातावरण कति सिर्जना गर्ला ? यो आम जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । हामी एक आपसमा मिल्न नसक्ने र विदेशी शक्तिले नै मिलादिनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना नियतिकै खेल बनेको छ । बाह्यशक्तिको प्रायोजनमा परिचालित गतिविधिले मुलुकलाई निर्धारित र वाञ्छित गन्तव्यमा नपुर्याउने अवश्यंभावी छ ।
संविधान निर्माणका लागि जिम्मेवारी बोकेको जननिर्वाचित संविधानसभा विगत एक महिनादेखि स्थगित छ । बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने जिकिर गरेको सत्तापक्ष संविधानसभाको बैठक नै स्थगित गरेर किंकर्तव्यबिमुढको अवस्थाका पुगेको छ । संविधानसभा बहिष्कार गरेर सडक आन्दोलन र जनशक्ति प्रदर्शनमा लागेको बिपक्षी गठबन्धन पनि कुहिराकै काग जस्तो बनेको छ । नेपालको राजनीतिक व्यवस्थापन नेपाली जनताको मतादेश वा जनादेशबाट नभै बाह्यशक्तिको चासो, प्रभाव र निर्देशनबाट गर्ने प्रयासको पछिल्लो कडी डा. भट्टराईको हालैको दिल्ली दौड र उनीबाट भएको बयानबाजीबाटै प्रदर्शित भएको छ । गत शनिवार सुरु भएको अहिलेको वार्ता चरणमा भट्टराईको हारगुहार र भारतको सक्रिय संलग्नताको दुराकाङ्क्षाको प्रभाव कति पर्छ भन्ने आम जिज्ञाशा जागृत भैरहेको छ । सार्थक वार्ता र संविधान निर्माण प्रक्रियाको वैधानिक थालनीका कुरा त अझै टाढाको विषय छ । आम नेपाली जनताले भने परिणामदायी वार्ताको अपेक्षा राखेका छन् ।